« Tonga ankehitriny ny fotoana hanoratantsika tantara vaovao eto amin’ ity Nosy malalantsika ity. Araka ny fanamby nataontsika, dia tsy maintsy hiposaka eto amintsika ny anjara masoandro, ka hamiratra sy ho sangany i Madagasikara. Ampy izay ny fanakanana ny fampandrosoana, ampy izay ny fifampisaraham-bazana, ampy izay ny fifaminganana. Tsy avelantsika eo amin’ ny vovoky ny faharesena ity Firenena ity. Tsy avelantsika ho potika na ho may na ho lasa lavenona ireo ezaka navelan’ ireo zokintsika tia tanindrazana. Azontsika atao tsara ny manangana Madagasikara ho reharehan’ ny Malagasy » 30 juin 2020
Anisany lahateny nambaran’ny Filoha Andry Rajoelina io nandritra ny fankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantena teny Analakely, omaly.
Tamin’ny fomba tsotra nefa mirindra no nankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantena. Tsy teny Mahamasina tahaka ny nahazatra fa niova endrika kely izany. Isan’ ny nampiova endrika azy ny nanatanterahana ny lanonam - pankalazana tetsy amin’ ny araben’ ny Fahaleovantena etsy Analakely. Voahaja ny ora nolazaina satria nanomboka tamin’ ny folo ora maraina ny lanonana ary tsy nifarana raha tsy tamin’ ny 12 ora antoandro. Tahaka ny mahazatra, nisy ny fisafoana ny andian-tafika nataon’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, izay nanamarika ny fiantombohan’ny lanonana. Nampahatsiahy ny nahazoana ny Fahaleovantena ny taona 1960 koa ny lanonana satria fiara "Cadillac" miloko fotsy izay nampiasain’ ny Filoha Philibert
Noho ny hamehana ara-pahasalamana eto amin’ny Firenena moa dia tsy nisy ny vahoaka nanatrika ny fety ankoatra ireo nahazo fanasana manokana niampy ny olo-manan-kaja maro nanotrona teny an-toerana. Manodidina ny 3120 isa teo ho eo kosa ireo ekipan’ny Foloalindahy nanatanteraka ny Matso izay nahitana ny avy amin’ny Zandary, Polisy niampy an’ireo mpiasan’ny fahasalamana miady amin’ny covid-19.
Tsy an’olom-bitsy i Madagasikara
tany mantsy, dia natao araben’ ny fahafahana ity arabe ity. Saingy tsy mbola fahafahan’ ny Malagasy akory izany tamin’ izany fotoana. Ary rehefa niverina ny Fahaleovantena dia novaina ho Araben’ny Fahaleovantena ity arabe ity. Ary tamin’ ny Repoblika voalohany dia teto no nanatontosana ny fankalazana ny Fetim - pirenena. Koa rariny sy hitsiny raha eto amin’ ity toerana ity isika no manamarika izao andro lehibe androany izao », hoy izy.
Niady ho an’ny taranaka
Tsy azo tamin’ny tanam-polo ny fahaleovan-tena fa tao ireo niady, nanao sorona ny ainy mba hahazoana izany, hoy hatrany ny Filoha. Nanteriny fa tokony hahasaropiaro izany tolona nataon’ny tany aloha izany satria raha tsy nisy izany tsy tonga tamin’izao i Madagasikara. « Mafy ny ady nitakiana ny Fahaleovantena nataon’ireo tia tanindrazana. Tao ny namoy ny ainy, tao ny nitondra takaitra, tao ireo natao sesitany, fa tsy nahasakana ireo mahery fo », hoy ny Filoha Andry Rajoelina nampahatsiahy ny hasarobidin’ny tolom-bahoaka. “Ny tanjona nokendren’ireo tia tanindrazana ireo dia ny tena Fahaleovantena ho an’ i Madagasikara. Nandritra izay 60 taona izay, na dia maro aza ny ezaka nataon’ ny mpitondra nifandimby teo aloha dia tsy mbola tratra ny fandrosoana andrandrain’ ny Malagasy”, hoy koa Filoha.
Nambaran’ny Filoha hatrany tamin’ny lahateniny omaly io fa :
« Nidina sy nitsotsorika isika tao anatin’ ny 60 taona. Ny faniriana dia 60 taona hiakatra sy hisandratra amin’ izay anie ity Nosy malalantsika ity. Hanova tantara isika mba ho lohany amin’izay i Madagasikara ». Nambarany koa fa tsy maintsy mandroso i Madagasikara amin’ny alalan’ireo ezaka ataon’ny Fitondram-panajakana hanafoanana ny fahantrana sy hanomezana asa ho an’ny Malagasy rehetra.